AMISOM oo ka hadashay dad rayid ah oo lagu diley Muqdisho - Jowhar Somali news Leader
Home News AMISOM oo ka hadashay dad rayid ah oo lagu diley Muqdisho
AMISOM oo ka hadashay dad rayid ah oo lagu diley Muqdisho
Howlgalka Midowga Africa ee Soomaaliya ayaa ka hadlay qarax kolayno ciidankooda ah lagula eegtay agagaarka Suuqa Xoolaha ee degmada Hiliwaa ee gobolka Banaadir, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 10 ruux oo shacab ah iyadoo qaraxan uu sababay in toban ruux oo rayid ah ay ku dhintaan halka dad kalana ayku dhaawacmeen.
War-Saxaafadeed kasoo baxay AMISOM ayaa waxaa lagu sheegay in Kolonyo kamid ah Gaadiidkooda oo kasoo baxay Xerada Maslax ee Magaalada Muqdisho qarax miino lagula eegtay xaafada Suuqa Xoolaha, isla markaana qaraxaasi uu ku burburay mid kamid ah Gaadiidka Xamuulka qaada oo Agab kala duwan u siday Cidiamada AMISOM, sidoo kale uu ku dhintay hal Ruux oo Shacab ah oo goobta marayay sida ku cad qoraalkooda.
“6dii Sebtember, 2020 mid ka mid ah gawaaridii ka mid ahaa kolonyo ka tirsan Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM), oo ka baxay Saldhigga Howlgalka ee Maslax kuna soo jeeday Muqdisho, waxaa lala beegsaday Qarxa Isgoyska Ex-Control Balcad. Baaritaanka hordhaca ah ayaa tilmaamaya in gaariga xamuulka ah uu qeyb ahaan burburay waxaana qaraxa ku dhintay hal qof oo shacab ah oo ka agdhawaa goobta uu weerarka ka dhacay” ayaa lagu yiri Bayaanka AMISOM ka soo baxay.
AMISOM ayaa tacsi u dirtay qoysaskii ay ka bexeen dadkii lagu laayay weerarkaas oo howlgalku qirtay in ay dileen hal qof oo shacab ah, hase yeeshee warar kale ay sheegayaan in ugu yaraan 10 ruux oo shacab ah ay ku dhinteen rasaas ay fureen ciidamada AMISOM.
Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa qoraalkooda ku sheegtay in ay siiwadayso dagaalkeeda ka dhanka ah Al Shabaab si bay dheheen Soomaaliya si loo raadiyo nabadda iyo xasilloonida dalka.
Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in AMISOM ay baarayso qaraxa ay nasiib darada ugu yeertay iyo khasaaraha ka dhashay.